Paartiin Naannoo Kibbaa bulchaa jiru aanga'oota ari'e - BBC News Afaan Oromoo
Paartiin Naannoo Kibbaa bulchaa jiru aanga'oota ari'e
Image copyright SEPDM
Paartiin Naannoo Saba, Sablamootaafi Ummatoota Kibbaa bulchaa jiru (SEPDM), bulchiinsa Magaalaa Hawaasaa dabalatee qondaaltoota ol-aanoo hedduu hojiirraa ari'ate.
BBC'n Waajjira Pirezidaantii Naannichaa irraa akka mirkanneeffateetti, Bulchaan Magaalaa Hawaasaa, aanga'oonni godinaale Sidaamaafi Haadiyaa itti gaafatamummaa isaanii irraa dhorkamaniiru.
Hojiirraa dhorkamuu aanga'oota kanneeniitiif akka sababaatti kan ka'amees, rakkoo nageenyaa tibbana Magaalaa Hawaasaafi naannoolee baadiyyaa godina Sidaamaatti argaman keessatti uumamee tureen kan walqabateedha jedhameera.
Aanga'oonni amma hojiirraa ari'ataman kunneen haala nageenya boora'e tibbana naannichatti umamee ture keessatti qooda qabu jedhamanii shakkamuun jedhameera.
SEPDM aanga'oota olaanoo bakkeewwan eeramaniitiin alattis, aanga'oota naannichatti bakkeewwan biraatti argaman irrattis tarkaanfii walfakkaataa fudhachu beeksiseera.
Akkasumas gaggeessitoota Godinaalee Kafaa fi Walaayittaatiif gochi walfakkaatu mul'ataa akka jiru himuun, itti gaafatamu jechuun akeekkachiiseera.
Haaluma walfakkaatuunis jeequumsa magaalaa Hawaasaafi naannosheetti uumamee tureen walqabatee, motarri magaalattii keessa akka hinsochooneef dhorkamuu konkolaachiftoota motaraafi jiraattoonni BBCn dubbisee mirkanneessaniiru.
Tarkaanfichis kan fudhatame haala nageenyaa waliin hidhata qaba kan jedhan jiraattoonni, dhorkaan kunis karaa dhaabbata sabaa himaa ummataa naannichaatiin ibsamu himu.
Konkolaachistoonni garuu waa'ee kanaa akka hindhagahiin BBC'tti himaniiru.
Sabii kanaanis magaalaa Hawaasaatti motaroonni baay'inaan mulataa turan ganama har'aatii kaasee garuu akka hinjirre kan dubbate jiraataan tokko, polisoonni tiraafikaas kanneen daandiirratti argatan dhaabaa jiraachaa jiraachuu isaanii arguu isaafi konkolaataafi baajaajoonni garuu hojjataa jiraachuu himeera.
Mormii magaalaa Wondoo Gannatitti guyyaa kaleessaa taasifameen sadii ajjeefaman